कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0) निर्माता र आपूर्तिकर्ता - कारखाना
कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0)
RAD140 पाउडर त्यहाँ SARM हरु सर्वोत्तम जनसङ्ख्या निर्माण को लागी मानिन्छ। SARMS को बारे मा महान कुरा हो ...... ..
SKU: 1182367-47-0 श्रेणी: सिर्म सीरीज
कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0) भिडियो
कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0) विवरण
कच्चा RAD140 पाउडर पनि टेस्टोलोन (कच्चा RAD140 पाउडर) को रूपमा पनि जान्छ, यो स्तनपानको क्यान्सर र पोष्टम्यानोपसल महिलाहरुमा मांसपेशियों को बर्बाद गर्न को लागी औषधि कम्पनी रेडियस द्वारा विकसित एक चुनिंदा एन्ड्रोजन रिसेप्टर मड्युलेटर (SARM) हो। टेस्टोलोन व्यापारिक बजारमा धेरै नयाँ छ 2010 मा यसको प्रारम्भिक खोज।
कच्चा RAD140 पाउडर एक nonsteroidal चुनिंदा एन्ड्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटर (SARM) को रूपमा। यसले हड्डीमा एस्ट्रोजन रिसेप्टरहरूलाई उत्प्रेरित गर्दछ र प्रजनन अंगहरूमा भन्दा बढी आत्मीयता संग मांसपेशी। कच्चा RAD140 पाउडर शरीरको बिरुवाहरु बीच लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ र एथलीटहरु लाई मांसपेशियों को मांसपेशिहरु लाई बढावा दिन को लागी।
कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0) एसpecifications
उत्पादन नाम कच्चा RAD140 पाउडर
रासायनिक नाम 2-Chloro-4-(((1R,2S)-1-(5-(4-cyanophenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-2-hydroxypropyl)amino)-3-methylbenzonitrile
ब्रान्ड NAME टेस्टोलोन
औषधि वर्ग चुनिंदा एन्ड्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटर (SARM)
कैस नम्बर 1182367-47-0
आणविक Fओमला C20H16 CLN5O2
आणविक Wआठ 393.831 जी / mol
Monoisotopic Mass 393.099 जी / mol
विलेयता, घुलनशीलता जल सुलभता 0.153 मिलीग्राम / एमएल
कच्चा RAD140 पाउडर एपप्पेशन कच्चा RAD140 पाउडर एक मासुपेशी बर्बाद र स्तन क्यान्सर जस्तै अवस्थाहरु को उपचार को लागि एक अनुसन्धानशील चयन को लागी एन्ड्रोजन रिसेप्टर मड्युलेटर (SARM) हो।
कच्चा कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0) विवरण
RAD140, टेस्टोलोनको रूपमा पनि जानिन्छ जसलाई प्राय: प्रायः SARM भनिन्छ। यो अझै अनुसन्धान गरिएको छ रेडियस हेल्थ नामक एक औषधि कम्पनी द्वारा।
चयनक्षेत्र एण्ड्रोजन रिसेप्टर मोड्युलेटरहरू (SARMs) स्टेरियोड्सहरूमा सुरक्षित विकल्पहरू भन्दा बढी कुन कुरामा विचार गर्छन्।
के उनलाई धेरै विशेष बनाउँछ?
खैर, यी SARM हरू सबै काममा चयन गर्दछ। चयनशील तरिकामा एस्ट्रोजन रिसेप्टरहरूमा बाध्यकारी गरेर, तपाईं दुबै प्रभावकारीहरूको बारेमा चिन्ता बिना लाभहरू अनुभव गर्नुहुनेछ।
यी यौगिहरु को पछि तंत्र पूरी प्रदर्शन को प्रदर्शन संग तुलना मा भिन्न हुन्छन्।
टेस्टोलोन (RAD140) को रूपमा SARM हरू स्टेरियोड्सहरूको तुलनामा धेरै कम साइड इफेक्टहरू छन् जसको कारण तिनीहरू प्रायः शरीरशैलीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
प्रायः प्रयोगकर्ताहरूले यो छनौट र एरेजन रिसेप्टर मोड्युलेटर (SARM) स्टेरियोड्सहरूको सबैभन्दा नजिकको चीज हो भन्ने दाबी गर्छन्। यसको मतलब तपाईं दुबला मांसपेशी जन र बल मा ठूलो वृद्धिको आशा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं केहि वसा पनि खोल्न सक्छ जब भवन निर्माण मांसपेशिहरु, जो केहि भन्न गर्न असम्भव छ।
किनभने यो SARM अत्यन्त बलियो छ, तपाईं कठोर परिणामहरूको आशा गर्न सक्नुहुनेछ। यो एन्ड्रोजन रिसेप्टरहरूसँग उच्च बाध्यकारी सम्बन्धको कारण, यो यौगिक सबैभन्दा बलियो हो।
चीजहरु लाई परिप्रेक्ष्य मा राखन को लागि, RAD140 कच्चे पाउडर एक anabolic छ: 80 को androgenic अनुपात: 1।
उच्च एनाबोल अनुपातमा कम्पाउन्डहरू ठूला ठूला भवन निर्माण हुन जान्छन्। यस SARM संग अनुसन्धान गर्दा तपाई सजिलै संग दुबला मांसपेशी जन को 10lbs मा राख्न सक्नुहुन्छ।
कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0) एक्शनको तंत्र
RAD140 ले शरीरमा चयनशील उत्तेजना र अरेजन रिसेप्टरहरूद्वारा काम गर्दछ। यसले मांसपेशी र हड्डीमा रिसेप्टरहरूलाई लक्षित गर्छ र प्रजनन अंगहरूमा कुनै प्रभाव पार्ने छैन।
SARM हरूको छनौट गर्ने क्षमता अहिले सम्म पूर्णतया बुझिएन। तिनीहरूले प्रायजसो टेस्टोस्टेरोन भन्दा फरक प्रोटीन सक्रिय गरेर काम गर्छन्। यो केवल केहि निश्चित एन्ड्रोजन रिसेप्टरहरूमा परिणाम - मुख्यतया मांसपेशिहरु सक्रिय हुन्छन्, अरूलाई बिदा गर्दा।
RAD140 को ढाँचा पनि स्टेरॉइड हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन जस्तो संरचना देखि भिन्न छ। यसको मतलब शरीरले RAD140 कच्चा पाउडर अन्य हार्मोनमा जस्तै एस्ट्रोजेनमा अनावश्यक प्रभाव हुन सक्छ।
यो परिसर मा मांसपेशियों को कोशिकाहरु र प्रोटीन को विकास को बढावा मा मांसपेशियों को विकास को उत्तेजित गर्दछ।
चूहों मा एक अध्ययन को आधार मा, RAD140 कच्चे पाउडर घायल हो दिमाग को क्षेत्रहरु मा रिसेप्टर्स सक्रिय गर्दछ। यसले MAPK मार्गलाई संकेत गर्दछ जुन कोशिकाहरूलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दछ।
लाभ कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0)
◆ बढ्दै मांसपेशी मास
RAD140 शरीर सौष्ठव समुदायमा यसको मांसपेशी-निर्माण प्रभावको लागि लोकप्रिय छ। अन्य SARMs जस्तै, यो पारंपरिक स्टेरियोड्स को अवांछित प्रभाव को बिना मांसपेशिहरु को विकास को एक तरीका प्रदान गर्दछ।
यस लोकप्रियता को बावजूद, RAD140 कच्चे पाउडर पछि वैज्ञानिक प्रमाण धेरै सीमित छ।
हाल, केवल एक पायलट अध्ययन छ जसले मासुको विकासमा RAD140 को प्रभावको जाँच गर्यो। अध्ययनमा, शोधकर्ताहरुले कुल9बन्दरहरुमा विभिन्न खुराक परीक्षण गरे। तिनीहरूले फेला पारे कि RAD140 ले केवल 28 दिनको प्रयोग पछि दुबला मांसपेशी जन बढ्छ।
RAD140 को मानव अध्ययन अझै सम्म गरिएको छैन। तथापि, विभिन्न SARM को एक क्लिनिकल परीक्षण ओस्टारिन भनिन्छ कि यसले दुबला मांसपेशी जन र वृद्ध मा शारीरिक प्रकार्यलाई सुधार गर्छ।
◆ स्तन क्यान्सर
RAD140 स्तनपानको लागि आशाजनक परिणामहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ।
स्तनपान को एक सामान्य रूप को रूप मा एन्ड्रोजन र एस्ट्रोजन रिसेप्टर भनिन्छ (एआर / ईआर +) हार्मोन को संवेदनशील छ। औषधिहरूले SARMs जस्ता यी रिसेप्टरहरूलाई असर गर्छ, क्यान्सर-लड्ने क्षमता हुन सक्छ।
सेल अध्ययनमा, RAD140 कच्चा पाउडर एस्ट्रोजनको प्रभावहरू रोक्न AR / ER + स्तन क्यान्सर सेलहरूको विकास रोक्न।
विशेष गरी, RAD140 ले ESR1 जीनलाई दबाब दिइरहेको देखिन्छ। यो जीन एस्ट्रोजन रिसेप्टरहरू सिर्जना गर्न जिम्मेवार छ। पर्याप्त रिसेप्टरहरू बिना, एस्ट्रोजनले बेजोड र निष्क्रिय छोड्न सक्छ।
◆ मस्तिष्क प्रभाव
एण्ड्रान्सहरूले मस्तिष्कको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। तिनीहरू मस्तिष्क सेल वृद्धि बढाउन, मेमोरी सुधार गर्न र एमीलोइड बिटा संकलन घटाउन सक्दछन्। एमीलोइड बेटा प्रोटीनहरू अल्जाइमर रोगको मुख्य कारण मानिन्छ।
चूहों को एक अध्ययन मा, RAD140 एमीलोइड बेटा को चोट को बिरुद्ध दिमाग तंत्रिका को रक्षा गरे। साथै, RAD140 र टेस्टोस्टेरोन न्यूरोटोक्सिन विरुद्ध सुरक्षामा समान रूपमा प्रभावकारी थियो।
दिलचस्प छ, केहि RAD140 प्रयोगकर्ताहरूले अझ राम्रो निद्राको रिपोर्ट गर्छन्, तर यस प्रभावलाई पछाडि कुनै अध्ययनहरू छैनन्। यही यौन प्रदर्शन बढाउनको क्षमताको रिपोर्टको लागी यही हो- यद्यपि यो सैद्धान्तिक रूपले यसको टेस्टोस्टेरोन-माइटिङ प्रभावसँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
◆ वजन घटाने
SARM लाई मांसपेशिहरु लाई बढाने मा पनि जानिन्छ शरीर को वोस को कम गर्दछ।
बन्दरहरुमा केवल एक अध्ययन मा मांसपेशी र चिसो मा RAD140 को प्रभाव देख्यो। यद्यपि यो दुबला मांसपेशिहरु बढायो, शरीर को बोसो मा प्रभाव स्पष्ट थिएन।
तथापि, अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि RAD140 ले कोलेस्ट्रॉल स्तरमा सुधार गर्दछ। यसबाहेक, उच्च मांसपेशिहरु मा ठूलो मात्रा को बढावा दिन को लागि ऊर्जा को उपयोग को बढन सक्छ।
सिफारिस गरिएको कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0) डोज़
अधिकतर प्रयोगकर्ताहरूले 20mg एक दिन भन्दा बढी गर्दैनन्। यो धेरै शक्तिशाली SARM हो त्यसैले सिफारिस भन्दा बढी लिन आवश्यक छैन।
RAD140 कच्चा पाउडर वाला अधिक चक्रहरू6बाट 8 हप्ता सम्म कहीं पनि हुनेछ। फेरि, अनुभवी शोधकर्ताहरुले यसलाई 10 हप्तामा धक्का दिन सक्छन्।
साइड इफेक्ट कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0)
RAD140 एक धेरै नयाँ अनुसन्धान सामग्री हो। यसको सुरक्षा र साइड इफेक्टहरू नैदानिक ​​रूपमा अझै मूल्याङ्कन गरिएको छैन।
SARM कसरी काम गर्ने आधारमा, RAD140 ले टेस्टोस्टेरोन भन्दा कम अवांछित प्रभावहरूको कारण हुनुपर्छ। उनले भने, RAD140 सँग पनि टेस्टोस्टेरोन-सम्बन्धी साइड इफेक्टहरू उत्पन्न गर्ने क्षमता छ। यी समावेश हुन सक्छ:
स्तनमा श्वसन / वृद्धि पुरुषहरूमा
महिलाहरु मा असामान्य शरीर को बाल विकास
नर पैटर्न पैटर्न / बाल हानि
मूड स्विंग र चिन्ता / अवसाद
मतभेद र उल्टी
शरीरबहिल्डरहरूले सामान्य रूपमा बाल साइड हानिलाई साइड इफेक्टको रूपमा रिपोर्ट गर्छ, जुन जब RAD140 लिन रोक्न उल्टै उल्टाइन्छ।
RAD140 (टेस्टोलोन): समीक्षा र जोखिम प्रयोग गर्नुहोस्
पियर जियोर्जियो रेजेटी; '' विश्लेषणात्मक जैव प्रौद्योगिकी मा कैिलिल इलेक्ट्रोफोरिस: थ्योरी को एक शेष ''
जॉन जे क्वा, वेई गाउ, मेना काफाटोस, रबर्ट ई मर्फी, विन्सेंट वी। सलमोनसन; '' पृथ्वी विज्ञान उपग्रह रिमोट सेन्सिङ: भो। 1: विज्ञान र उपकरण ''
क्यान्सर रिसर्चको लागि अमेरिकन एसोसिएसनले; '' AACR 2017 कार्यवाही: सार सार 3063-5947 ''
लागि 1 समीक्षा कच्चा RAD140 पाउडर (1182367-47-0)
परीक्षण गर्न RAD140 पाउडर पाउनुभयो, परीक्षण परिणाम धेरै उच्च गुणस्तर र शुद्धता देखाउँदछ!
कच्चा अन्तुरबोल पाउडर (317318-70-0)
कच्चा अन्नारोबोल पाउडर पनि GW-501516 को रूपमा चिनिन्छ, केही व्यक्तिले यसलाई कार्डारिनको रूपमा पनि उल्लेख गर्न सक्छ। Endurobol को कारण एक ......
कच्चा S4 पाउडर (401900-40-1)
S4 पाउडर, इन्दारिन को रूपमा पनि जानिन्छ, एक चयनात्मक एन्ड्रोजन रिसेप्टर मड्युलेटर (SARM) हो। S4 SARM को एक ......... को रूप मा मानिन्छ।